बुधबारको पूजा विधि र व्रत कथा
रात्रिकालीन व्यवसायको समय सीमा हट्यो, चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न पाउने
‘आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थ’मा दीपेन्द्रसिंह ऐरीकाे मनाेनयन
‘दक्षिण एसियाकै अग्रस्थानमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता’
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने, मिति अनिश्चित
१९ कार्तिक २०७७, बुधबार November 1, 2020 शुचि खबर	0 Comments
बुधबारको व्रत बुध ग्रहको कुप्रभावको शान्ति कामनाका निम्ति एवं धन, बुद्धि, विद्या र व्यापार वृद्धिका लागि गर्ने गरिन्छ । यो व्रत विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधबारबाट सुरु गर्नु पर्दछ । यसलाई कमसेकम ७ वटा बुधबारसम्म लिएर मात्र समापन गर्नु पर्दछ । व्रत सुरु गर्ने दिन बिहान स्नान गरी शुद्ध भई हरियो कपडा लगाएर भगवानसामु विष्णु नाम जप गर्नु पर्दछ। ‘ॐ बुधाय नमः’ मन्त्रलाई जप गर्नु पर्दछ। यो व्रतमा पनि एकछाक नुन बार्नुपर्दछ । असन चिजहरु भोजन गर्नु हुँदैन । भोजनमा घ्यू, मुंगको दाल अथवा मुंगको दालबाट बनेका परिकार ग्रहण गर्नु पर्दछ । दान गर्दा पनि यिनै चीजहरू दान गर्नुपर्दछ । अन्तिम बुधबारचाहिँ दही, घ्यूले हवन गरी हरियो कपडा दान गर्नु पर्दछ। गाई छ भने गाईलाई सेवा गर्ने गर्नु पर्दछ ।
एक पटकको कुरा हो एउटा मानिस आफ्नी पत्नी लिई आउन ससुराल गयो । त्यहाँ केही दिन बिताएपछि उसले सासु-ससुरासित विदा माग्यो । तर सबैले आज बुधवार हो, आज यात्रा गर्नु हुदैन भने । ऊ केही गरी मानेन र हठधर्मी भएर बुधवारकै दिन पत्नीलाई साथमा लिई आफ्नो घर तर्फ प्रस्थान गर्यो । बाटामा उसकी पत्नीलाई तिर्खा लाग्यो र आफू तिर्खाएको कुर उसले आफ्ना पतिलाई बताई । अनि पत्निको प्यास मेटाउने उद्देश्यले ऊ अमखोरा लिई रथबाट उत्रिएर पानिको खोजिमा गयो । तर पानी लिएर फर्कदा उसले के देख्यो भने उसकी पत्निका साथमा ऊजस्तै अर्को व्यक्ति बसेको छ, त्यो मान्छे उस्तै रूपरङ्ग र भेषभूषामा छ । यस्तो दृश्य देखेर ऊ आश्चर्यचकित भयो । त्यस बहुरूपी व्यक्तिसित उसले क्रोधपूर्वक भन्यो – तँ को होस् अनि मेरी पत्नीका निकटमा किन बसेको ? अर्को मान्छेले भन्यो यी त मेरी पत्नी पो हुन् त ।
म अहिले भर्खरै ससुरालबाट विदा मागेर आउँदैछु । ती दुबै एकअर्कासित झगडा गर्न थाले । त्यसै बेला राज्यका सिपाहीहरू आएर त्यो पानी लीन जाने अमखोरा लिएको व्यक्तिलाई समात्न खोज्दै त्यस स्त्रीलाई सोधे – यी दुईजना मध्ये तिम्रो असली पति चाहि कुन हो ? त्यस पछि त्यस स्त्रीले जवाब दिन सकिन किनभने दुबै व्यक्तिको संपूर्ण स्वरूप एकै किसिमको थियो । विचरीले कसलाई आफ्नो पति भन्नु, अलमल्ल परी अनि ईश्वरसित प्रार्थना गर्दै भन्न थाली – हे परमेश्वर ! यो के विचित्रको लीला हो । त्यस स्त्रीको वास्तविक पति पनि ईश्वरपुकारा गर्दै रुनकराउन थाल्यो, उसको धेरैबेरसम्मको आलापविलापपछि आकाशवाणी हुन गयो – मूर्ख ! आज बुधवारका दिन तैले यात्रा गर्नुहुदैनथ्यो, कसैको कुरालाई वास्ता नगरी यात्रा गरेकाले बुधदेव भगवानले यो लीला देखाउनु भएको हो । त्यस व्यक्तिले त्यसपछि बुधदेव भगवानसित प्रार्थना गर्यो र आफ्नो भूलप्रति क्षमा माग्यो । अनि भगवान अन्तर्धान हुनुभयो । ऊ आफ्नी स्त्रीलाई लिएर घर गयो तथा त्यस पछि दाम्पत्य सुखका लागि एवं कहिल्यै वियोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक बुधवारका दिन ती दुबै पति-पत्नी नियमपूर्वक व्रत गर्न थाले । जो व्यक्तिले यस कथालाई श्रवण गर्दछ अथवा सुनाउँछ, त्यसलाई बुधवारका दिन यात्रा गर्नाले कुनै दोष त लाग्दैन नै उसको दाम्पत्य जीवनमा कहिल्यै दुबिधा हुने छैन एवं उसलाई सबै किसिमले सुखप्राप्ति हुनेछ ।
← वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल सहित प्यानलकै उम्मेदवारी दर्ता
आजको राशिफल २०७७ कार्तिक १९ (ई.सं.4November 2020) →
असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म मलमास
घटस्थापनाको शुभ साइत बिहान ११ः४६ बजे
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार October 16, 2020 शुचि खबर	0
२७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार May 16, 2021 शुचि खबर	0
रूसी इन्धनमा अमेरिकाको प्रतिबन्ध
क्रिकेट हेर्न २ दिन सार्वजनिक विदा
नेपाल टेलिकमले ल्यायो अटम अफर, के के छन् सुविधा ?
१ कार्तिक २०७८, सोमबार October 19, 2021 शुचि खबर	0
नेपाल टेलिकमले अटम अफर उपलब्ध गराउने भएको छ। मोबाइल सेवामा आकर्षक डाटा र भ्वाइस प्याकहरु तथा एफटिटिएच सेवामा समर अफर
देश समाचार संस्कृति/परम्परा
पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि खुला
२८ माघ २०७८, शुक्रबार February 11, 2022 शुचि खबर	0
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरका कारण माघ पहिलो हप्तादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिएको छ । जिल्ला
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार October 19, 2021 शुचि खबर	0
२५ फाल्गुन २०७८, बुधबार शुचि खबर	0
चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले वाङको भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। ‘दुबैतिर
२५ फाल्गुन २०७८, बुधबार March 9, 2022 शुचि खबर	0
चीनमा चिकित्साशास्त्र नपढ्न भारतीय विद्यार्थीलाई भारत सरकारको आग्रह
२८ माघ २०७८, शुक्रबार शुचि खबर	0
अमेरीकामा आँधीका कारण ५० जना भन्दा बढीको मृत्यु
२६ मंसिर २०७८, आईतवार शुचि खबर	0